Xog Xasaasi ah oo laga helay kulan Villa Somalia ku dhexmaray Farmaajo & Ugaaska Khaliifa | SMC
Home WARARKA MAANTA Xog Xasaasi ah oo laga helay kulan Villa Somalia ku dhexmaray Farmaajo...
Xog Xasaasi ah oo laga helay kulan Villa Somalia ku dhexmaray Farmaajo & Ugaaska Khaliifa
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay Ugaaska guud ee beesha Xawaadle,Ugaas Xasan Ugaas Khaliif, iyagoo kulankooda ahaa mid looga hadlayay arrimaha gobolka Hiiraan iyo dhismaha HirShabeelle.
Ugaas Khalif oo mudo bil ah ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa kulankii labaad la yeeshay Madaxweyne Farmaajo, waxayna si gaar ah ugu wada hadleen geedi socodka nabadeed iyo dhismaha maamulka HirShabeelle ee cusub oo loo dhan yahay.
Ugaaska Khalif ayaa lagu warramay inuu la dhacsan yahay qaabka dowladda federaalka wax u maamuleyso ee dhismaha HirShabeelle, isagoona u muuqda inuu ku taageerayo dowladda dhismaha maamulka la filaayo in HirShabeelle yeelato.
Ugaas Xasan oo horay looga bartay mucaaradnimo iyo inuu kasoo horjeesto maamuladii hore ee Hirshabeelle xiligii dowladdii Xasan Sheekh ayaa hadda si aad ah ula dhacsan nidaamka socda.
Warar lagu kasloon yahay ayaa sheegaya in magacaabida wasiirka arrimaha gudaha uu ku yimid dalabka Ugaas Khaliif, taasoo u sabab ah inuu aqbalo nidaamka doorasho ee Hirshabeelle xiligaan ka socda.
Sidoo kale, warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda ay ku tixgelineyso Ugaaska soo xulida xubnaha xildhibaanada beesha Xawaadle ee ugu mid noqonaya baarlamaanka Somalia.
Ugaas Khalif ayaa lagu xasuustaa go’aanadiisii mayalka adkaa ee uu kaga horyimid dowladdii Xasan Sheekh iyo eedeymihii uu warbaahinta ugu gudbin jiray.
Previous articleGuddoomiyaha D/Afgooye oo shaaciyay xaalada adag oo kajirta degmadaas
Next articleDhageyso Qaar kamid ah Dhalinyarada Baydhabo Oo Aragtidooda Ka dhiibtay doorka ay Ku leeyihiin Go’aan ka gaarista Arimaha Bulshada.